Cuntooyinka Sababa Cudurka Kansarka Ee ay Tahay Inaad Ka Fogaato - Daryeel Magazine
Kansarku waa kelmad balaadhan oo loo isticmaalo noocyo badan oo cudurro ah kuwaas oo la xidhiidha unugyo ka mid ah jidhka oo u kora ama u waynaada si xadka ka baxsan, kobcintan ama waynaantan xad dhaafka ah ee unugyadu waxay awood u leedahay inay qabsato ama ay ku baahdo qaybaha kale ee jidhka, waa jira in ka badan 200 oo nooc oo kansar ah oo kala duwan.
Cudurkaan kansarku Allaha inaga hayee wuxuu sanad walba sababaa dhimasho aad u badan malaayiin qof ayaa sanad walba la daweeyaa noocyada kala duwan ee kansarka sida kansarka naasaha, maqaarka, afka, mindhicirrada, kaadi haysta iyo kansarro kaloo badan.
Calaamadaha lagu garto cudurkaan kansarka waxaa ka mid ah burooyin waa wayn oo cusub oo qofka oo qofka kasoo baxa, dhiig bax aan caadi ahayn, miisaanka qofka oo si bilaa sabab ah hoos ugu dhaca, daal, abateetka oo yaraada, neefta oo qofka ku adkaata, iyo qufac. Inkastoo calaamahaan ay sheegi karaan cudurka kansarka waxay kaloo ay u dhici karaan sababo kale.
Waxaad samayn kartaa tallooyin aad uga hortagi karto cudurka kansarka sida inaad joojiso cabbista sigaarka, inaad ilaaliso miisaanka jidhkaaga, inaad hoos iskaga dhigto welwelka iyo stress-ka badan, hurdo kugu filan oo aad seexato iyo in sidoo kale hab nololeedkaaga ka dhigto mid firfircoon, intaa waxaa dheer inaad cunto cunno caafimaad qabta aad iyo aad ayay muhiim u tahay sidoo kale waa inaad waxyaabaha aad cunto ka saartaa cuntooyinka sababa cudurka kansarka.
Hadalka oo kooban waa kuwaan cuntooyinka sababa cudurka kansarka ee ay tahay inaad ka fogaato:
6 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Hurdada Ka Hor!!! Cuntooyin Ay Tahay Inay Ka Fogaato Hooyada Ilmaha Naaska Nuujisa 4 Calaamadood Oo Ku Tusinaya Inaad U Baahan Tahay Hurdo Iyo Nasasho Badan Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka